အနုပညာအလုပ်လုပ်လိုသူ ရွာသူ/သားများထံ သတင်းကောင်းနှင့် ကြော်ငြာတစ်ခု ပေးပို့ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အနုပညာအလုပ်လုပ်လိုသူ ရွာသူ/သားများထံ သတင်းကောင်းနှင့် ကြော်ငြာတစ်ခု ပေးပို့ခြင်း
အနုပညာအလုပ်လုပ်လိုသူ ရွာသူ/သားများထံ သတင်းကောင်းနှင့် ကြော်ငြာတစ်ခု ပေးပို့ခြင်း
Posted by King on Jun 21, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 47 comments
အခုတစ်လော ရွာထဲမှာ လူသစ်တွေ အခြေအချနေထိုင်လာကြတော့ ရွာကလည်း အရင်ကထပ် ပိုပြီး စည်ကားလာတာတော့အမှန်ပါပဲ … သူကြီးရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည် ရွာသူ/သားတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ် စိတ်ထားတွေနဲ့ အတွေးသစ်အမြင်သစ်တွေ ပေါများလှတဲ့ ရွာထဲမှာ လူများတာလည်း ဆန်းတော့ မဆန်းလှပါဘူး … ဒါနဲ့ပဲ ရွာထဲမှာ စီးပွားရေး စလုပ်ဖို့ ကြံမိတော့တယ် အဲဒါနဲ့ပဲ ဟိုပို့စ်ကို ၀င်ပြီး 10 ယူလိုက် ဒီပို့စ်ကို ၀င်ပြီး 10 ယူလိုက်နဲ့ စုထားတဲ့ ပွိုင့်တွေကို ကိုအောင်ပုတို့ဆီမှာ ကြိုပွိုင့်နဲ့ ရောင်းပြီး လုပ်ငန်း တစ်ခု တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်… အခုလောလောဆယ်တော့ အနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်း အရင်စလုပ်မယ်ပေါ့ … နောက်မှ ရလာတဲ့ အမြတ်ငွေတွေနဲ့ ပရဟိတ အတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းတွေထောင်မယ် …နောက်တော့ ရွာသစ်စီမံကိန်းတွေ လုပ်တဲ့အခါကျရင် ဆောက်လုပ်ရေးတွေလုပ်မယ် (အခုကတည်းက သူကြီးဆီ ကြိုပြောထားတယ်ဗျ) … ပြီးရင်ဗျာ ရွာရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တည်းခိုရေး၊ စားသောက်ရေး စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိကြောင်းပါ တစ်ခါတည်း ကြိုတင်ကြော်ငြာထားတယ်ဗျ .. ဟဲ ဟဲ :D ….
ကဲ ကဲ လိုရင်းတောင် ပြောဖို့ မေ့နေတယ် အခု King Entertainment က ရိုက်ကူးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအတွက် သရုပ်ဆောင်၊ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာ၊ ရှူတင်မန်နေဂျာ အစရှိသဖြင့် ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးရန် သရုပ်ဆောင်များ ခန့်ထားလိုပါသောကြောင့်
ရွာထဲမှ ရွာသူ/သား ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် ညီလေး ညီမလေးတို့အား သတင်းကောင်းပါး လိုက်ပါတယ် ….
အနုပညာရှင်အမည် – :D
ပါဝင်လိုသည့်နေရာ – :D (ဒါရိုက်တာ၊ မင်းသား အစရှိသဖြင့်)
ပါဝင်လိုသည့်အကြောင်းအရင်း – :D (ရုပ်ချောသဖြင့် မင်းသားလုပ်လိုသည် အစရှိသဖြင့်)
အောက်တွင် Comments များရေးသွင်းပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
(အော်ကျန်သွားလို့ သူဂျီးလည်း လျှောက်ချင်ရင် ဦးစားပေး ၁ နော်) ဟဲ ဟဲ
အနုပညာရှင်အမည် – မစ်စတာဂျော်နီမိုးအာကာ ၀ါဒီဘဒေါင်းစွတ်
ပါဝင်လိုသည့်နေရာ – မင်းသား
ပါဝင်လိုသည့်အကြောင်းအရင်း – ရုပ်ချောသဖြင့် မင်းသားလုပ်လိုသည်
/မင်းသမီးချောချောလေးများကိုဖတ်ချင်သည်/အတည်သရုပ်ဆောင်မည်။မှတ်ချက်-အချစ်ခန်းမှလွဲ၍ အက်ရှင်ခန်းများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမင်းသား – မစ်စတာဂျော်နီမိုးအာကာ ၀ါဒီဘဒေါင်းစွတ်
ပေါ်မလာ ဖြန့် ချိရေး ကုမ္ပဏ္ဏီ
ဟုတ်ပါပီ ပထမဆုံး မင်းသားလာလျှောက်တဲ့သူအတွက်
ဂဏန်းတစ်ခု နှိုက်သွားပါ …… ဂဏန်းမနှိုက်နိုင်ရင်လည်း ပုဇွန်လုံးဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုပေါ့
ဟီးဟီး..နှိုက်ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ-(ကံချမ်းမဲ)-
မီးထိုး မှန်ထောင် သေတ္တာထမ်း ဖြတ်လျှောက် ဘာရရလုပ်ပါရစေ ..။
ကိုဖက်က ဒီနေရာပဲ တော်ပီလား
ဇာတ်ညွှန်းတွေ ဘာတွေရေးတဲ့ နေရာရော မလုပ်ချင်ဘူးလားဗျ
အနုပညာရှင်အမည် – Nature
ပါဝင်လိုသည့်နေရာ – ဒါရိုက်တာ
ပါဝင်လိုသည့်အကြောင်းအရင်း-ပထမတော့ မင်းသားလျှောက်မလို့ပါ။ မတော်လို့ မင်းသားလုပ်ရပြီး မင်းသမီးနဲ့ မတွဲရပဲ ဒါရိုက်တာညစ်ညစ်နဲ့တွေ့ပြီး ဟိုဟာသင်းသတ်တာကြီးနဲ့ တွဲပေးရင်ဒုက္ခ လို့ တွေးမိလို့ ဒါရိုက်တာလျှောက်လိုက်တာပါ။ ဒါရိုက်တာဖြစ်ရင်တော့လာထားပဲ။ မင်းသားရော မင်းသမီးရော ကောင်းကောင်းလေးတွဲချင်ရင် ……..။ လူကြမ်းလည်း ကောင်းကောင်းလေး ကြမ်းချင်ရင်…..။ မဟုတ်လို့ကတော့ ဟိုဟာကြီးနဲ့တွဲပေးလိုက်မယ်။
ဒါရိုက်တာလည်း အဲလိုညစ်လို့တော့ မရပါဘူး
ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်မှာဆိုတော့ နည်းနည်းလည်းရိုက်ရတာကြာမယ်ဗျ .. ဒါရိုက်တာကလည်း သူ့ဂွင်လေးထဲကပဲ ညစ်လို့ရမှာပါ။ ၀တ္ထုဇာတ်ညွှန်းအတိုင်း သူက ရိုက်ရမှာကိုးဗျ
အဲဒီတော့ ၀တ္ထု ဇာတ်ညွှန်းကောင်းရင်ကောင်းသလောက် အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ ပြောထားလိုက် တယ်ဗျ …
့koking က producer ဆိုရင် ရူတင်မန်နေဂျာ လုပ်မယ် ဗျာ ။ ငွေစာရင်း ပြန်မတောင်းကြေး ။ ပထမ ဆုံး ကား အတွက် ရူတင် အသုံးစရိတ် သိန်း ၁၀၀၀ မထုတ်ခင် လောလောဆယ် ၁၀ အရင်ယူလိုက်ပြီ ဗျို့ ..။ ဟီဟိ
ဇာတ်ညွှန်ရေးမယ့်လူ ရှိမှ အဆင်ပြေမှာဗျ ဘာဇာတ်လမ်းရိုက်ရမှန်းတောင် သိဝူးးးးး
၀တ္ထုလည်း မ၀ယ်ရသေးဘူးဗျ ကိုပေါက်ဆီအပ်ရင်ကောင်းမလား … အမျိုးသမီးတွေဆီ အပ်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေသေးတာဗျို့ …
ဗီယက်နာမ်ငွေ( ဒေါင်)နဲ့ ပေးလို့ရမလား။
ပါဝင်မဲ့ မင်းသား မင်းသမီး တွေ နာမည်စာရင်း သိရရင် ရေးပေးပါ့မယ်။
မမ ဆူးလို့ ခေါ်ရမလား
အန်တီ ဆူးလို့ပဲ ခေါ်ရမလား
မင်းသား/မင်းသမီး အစရှိသဖြင့် မရွေးချယ်ရသေးပါဘူး …
အားလုံးရွေးပြီးရင် မမဆူး သို့မဟုတ် အန်တီဆူး ဆီ အကြောင်းပြန်ပါ့မယ် :D
ဖွားဆူး က ၁၀ သူကြီးဆီ က နေ စရံ ၁၀ ပေးပြီး ပြီ ဆိုတော့ ရှူတင်စရိတ် ထဲ က ၁၀ ထပ်ယူပြီ ဗျာ ဟီဟိ ကိုကင်း ရေ ရှူတင်စရိတ် အမြန်ဆုံး ထုတ်ပေးပါတော့ ဒီလူလောက်နဲ့ ဆို အခု ခေတ် စားနေတဲ့ ၃ ရက် ၁ ကား မဟုတ်ဘူး ၁ ရက် ၃ ကား ရိုက်ပေးပါ့မယ် ။ မြန်မာ့ ဗီဒီယို လောက ရဲ့ဘိုးတော်ကင်း နှင့် ရွာသားများ ဆိုပြီး ကားနာမည်ပေးမယ် ဗျာ ။
မောင်ပေ.. ဒေါ်ဆူး က ရွာစ၀င်ကတည်းက တရွာလုံး နာမည် အသုံးချပြီး ပိုစ်တွေ ရေးခဲ့တာ အများကြီးပဲ.. တခါမှ ရွာထဲမှာ ပူညံ ပူညံ မရှိဘူး။
တနေ့က တွေ့ဆုံပွဲ မန်ဘာပုံရိပ် ဆိုပြီး တင်လိုက်တာ နောက်က ဘာမှန်းမသိ ညာ မှန်းမသိ ပေါက်ကရ လျှောက်ရေးပြီး ပိုစ်တွေ တင်လို့ တရွာလုံး ကြွက်ကြွက်ကို ညံနေတာပဲ။
ဒီတခေါက် ဇတ်လမ်း ထဲမှာ မောင်ပေ က မင်းသား နေရာက ထားပြီးတော့ အကြောလျော့ တဲ့ အခန်းက သရုပ်ဆောင်ရမယ်။ အကြော ပြင်ပေးတာကတော့ ရွာပြင်က မမပု အဖွဲ့ဝင်တွေ.. အဲလိုလေး ဇတ်လမ်းလေး တည်ပေးလိုက်ရမလား။
ရွာသူတွေ (ရွာထဲက သူတွေ) မဖြစ်စေရပါဘူး။
ကီဝီ သီး စပျစ်သီး ဒူးရင်း ပန်းသီး ချီးစ်ကိတ် ကော်ဖီကောင်းကောင်း တကယ်စား။သောက် ရတဲ့ (စားနေတာမပြရတဲ့) အခန်းရိုက်ရင် ကူပါမယ်.။
ချွင်းချက်- ကင်မရာကတော့ နောက်ကျောနေရပါမည် ။
ဖေကြီးKing တမီးကတော့ ဖေကြီးတမီးဆိုတော့ မင်းသမီးနေရာယူမယ်
ဘာပဲပြောပြော ၁၀ တော့ တန်းသွားပြီ :D
လုပ်ချင်တာလုပ် ဟိုဒင်းဟိုဟာ ဟိုဟာ ဟိုလူတွေထက်သာအောင်
စိတ်ရှိတိုင်းသာလုပ် ဖေကြီး လိုက်ရှင်းပေးမယ် … (မှတ်ချက်။ ရွာထဲတွင်သာ)
နောက်မှ သမီးအဖြစ် မွေးစားခြင်းဆိုတာကို
ရွာထဲမှာ လူသိရှင်ကြား ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပါ
ကြိုပြောထားလိုက်ပါတယ် …. :D
လိုအပ်သောပစ္စည်းတွေကို တင်သွင်းပေးမယ့် ဆပ်ပလိုင်ယာပေါ့ဗျာ။
သူများထက်ဈေးပေါစေရမယ်လို့ လုံးဝ အာမခံတယ်။
လူအစ ပစ္စည်းအဆုံးအကုန်လုံးလိုတာကို သွင်းပေးပါမယ်။
တစ်ရက်စုတ်တဲ့ တရုတ်စက်တော့ လုပ်နဲ့နော် …. :D
၀မ်းသာလိုက်တာ အန်တီ ဆူးရယ် ။ အန်တီဆူး က စကား စ လိုက်တော့ ခါ ။ မင်းသမီး လုပ်ချင်သူ လည်း တွေ့ လာရပြီ ။ ကိုကိုပု က တော့ အခုထိ စာရင်း မပေးသေးဘူး ။ ပေးလည်း ဖောင်ပြည့် သွားပြီ မလား ။ ဒီတော့ အန်တီဆူး ပြောခဲ့သလို ရိုက်ဖြစ်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် မောင်ပေ လက်ရှိ ထမင်းကျွေးနေသော အလုပ် မှ ခွင့်ယူ ကာ အမြန်ဆုံး ပြေးလာခဲ့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းပို့ လိုက်ပါသည် ခင်ဗျား ။ ဟီဟိ
အကြောလျော့ ဇတ်လမ်းက တင်ပြီးသား အကြောင်းအရာ ဖြစ်နေလေတော့ မတူညီတဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတဲ့ ဇတ်လမ်းလေး ပြောင်းလိုက်မယ်။
ကိုယ်တိုင် မင်းသားလုပ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အကြောလျော့ ဇတ်လမ်းကို သိပြီး အချစ်ပိုသွားတဲ့ မောင်ပေ ဇနီး ချစ်ချစ်ကြီးမှ မျက်နှာလို မျက်နှာရ မောင်ပေ အား မောင်ပေ ဇနီး ခေါက်……….ဆွဲ………..ကြော် ပူပူလေးကို ရေပွတ်ဆေးထားတဲ့ သ………ခွား……သီး ကို အခွံ မခွာ ပါးပါးလှီး နုတ်နုတ်ဆင်း အတုံး အတုံးလေး တွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး အချဉ်စိမ်ပြီး ခေါက်ဆွဲကြော် နဲ့ တွဲ ခွံကျွှေးတဲ့ အခန်းလေး ထည့်ပြီး စီစဉ်ပေးရင် ကောင်းမလား တွေးမိတယ်။
ရှုတင် စရိတ်ထဲမှာ ခေါက်ဆွဲကြော် နဲ့ သခွားချဉ်လေး တွဲထည့်လိုက်ပေါ့။ အလကား လည်း စားရတာပေါ့။ အဟိ..
အဲလောက်ကြီးနဲ့ လုပ်နဲ့လေ :D
အပေါ်က အလားအလာတွေကြည့်ရတာ မကြာမီ (မြန်မာသာမက ကမ္ဘာကျော်အောင်) တဟုန်ထိုးအောင်မြင်လာမယ့် ကင်းအင်တာပရိုက်စ်ကို ရှယ်ယာလေး ထည့်ဝင်ချင်ပါတယ် သဌေးမင်း ကင်း ရှင့်။ ဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ယူအက်မှာ ထုတ်ယူဖို့ cheque ရေးပေးပါ့မယ်။ (မနှမျောတော့ဘူး။ သဂျီးဆီက ပွိုင့်တွေ အကုန် ရင်းနှီးပစ်လိုက်မယ်။) :D
နောင် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ် …
အဲဒီအခါကျရင် ရွာသူ/သား အများပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိပါတယ် ..
အဲဒီအချကျရင် ရှယ်ယာတွေ အကုန်ထုတ်ရောင်းမှာမို့ သတင်းထပ်မံ ကြေညာပေးပါ့မယ်ဗျ
တခါတလေ ရွာသူရွာသားအချင်းချင်း နောက်ကြပြောင်ကြတာပါ။
ကိုပေကြီး ကြည့်ရတာ မဟားဒယား တက်ကြွနေပုံရတယ်နော်…
ဟိုကားရိုက်မယ်ဆို အလကား မင်းသားလုပ်ပေးမယ်….
ဟိုကား ရိုက်ဖို့ ဟိုဟာ မရှိလို့
ဟိုဒင်းနဲ့ ဟိုဟာ ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်
ဟိုလို အခန်းကို ဟိုပုံစံနဲ့
ဟိုဒင်းဟိုဟာ လုပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း
ကိုဘတ်ကစ်ကို အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ် …. :D
ဇာတ်ပို့ နေရာ လျှောက်တဲ့သူ မရှိသေးဘူးဆိုတော့ မီးပဲ အနစ်နာခံပြီး ဇာတ်ပို့ လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်လေ … ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးမှာ ဇာတ်ပို့ကလဲ အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ …. ဟီ … စရံ 10 ပါ တစ်ခါတည်းယူသွားတယ်….
သူ့နေရာနဲ့သူဆိုတော့ ရိုက်ကွင်းမှာ ဘာလာရောင်းရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။ ချက်ချင်းလက်ငင်းငွေပေါ်တာပဲလုပ်တော့မယ်…………:P
ဈေးသည်ဆိုရင် အမြတ်ခွန်ဆောင်ရမယ် … ပြီးတော့ ရှူတင်ဘေးမှာလာရောင်းရင် ဈေးကောက်လည်း ပေးရမယ် …
King ဖောင်ဒေးရှင်း (ပရဟိတ)ရန်ပုံငွေအတွက် … :D
အင်း….. ရွာထဲမှာလဲ ဒီလိုငပေါမျိုးက ရှိသေး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 10 တော.ရအောင်ယူသွားလိုက်ပြီ။:)
အဲဒီ ပိုစ့်ထဲမှာ မင်းသားမင်းသမီး ရွေးလို့ရတယ်။
မင်းသမီး အင်အား နည်းနေသေးတယ် ….. အားဖြည့်လိုက်မယ် ဟိဟိ
အဲဒီ ပိုစ်ထဲမှာ မင်းသားမင်းသမီး ရွေးလို့ရတယ်
ပရိုဂျူဆာ ကင်းရေ- မင်းသားကို ဘယ်သူ့ကို တင်ရမယ်ဆိုတာ တောင် မသိဘူးလား။ ဘာမဆို ရွှေ ပါရင် ပိုကောင်းတယ် မဟုတ်လား။
မီးလောင်ကျွမ်း ကတော့ တကား ရိုက်ပေးမယ်တဲ့
တွဲချင်တဲ့ မင်းသမီးများရှိရင် စာရင်းပေးထားနော်
မင်းသားကတော့ရွေးစရာမလိုတော့ဘူး၊ automatic ရွေးပြီသားပဲ။ ရွာထဲဝင်လာကတည်းက ကျနော် မင်းသားပါခင်ဗျ လို့ဆိုပြီးရွာထဲ ၀င်လာတဲ့ ရွှေမင်းသားပဲပေါ့။ ဟဲ ဟဲ ကျွန်ုပ်ကတော့ ဒါရိုက်တာနော်..။
“ပေါ်မလာ အတော်ကြာပေါ့” ဒါကရိုးသွားပြီ
“ရှောင် ပုန်းကောင်းတဲ့သူရေ” ကြွေးများလို့လေ။
ဒီနာမည်ရော မကောင်းဘူးလား ” ဓာတ်ကြိုးကိုမောင်ကိုင်ပါ့မယ် “
မျက်ရည်ဆက်လတ် အသက်ထွက်ဆိုရင်ရော မကောင်းဘူးလား :D
ဒါဆို ဒီလိုလုပ်ပါလား ” ဓာတ်ကြိုးကိုမောင်ကိုင်ပါ့မယ် “ကို အရင်ရိုက်လိုက် ပြီးရင် ဒုတိယတွဲအဖြစ် ‘မျက်ရည်ဆက်လတ် အသက်ထွက်” ကိုဆက်ရိုက် အဲတာဆိုရင်ရော :D
အင်း…သရုပ်ဆောင်တော့ မလုပ်တော့ပါဘူး။ ခုထိအဆိုတော်နေရာ ဘယ်သူမှမလျှောက်ကြသေးဘူးမလား။ နောက်ခံဇာတ်ဝင်တေး ဆိုပေးမယ်လေ။ စရံ၁၀ယူသွားတယ်နော်။ :p